DAAWO SAWIRO:- In kabadan 20 ruux oo ku dhimatay toogasho ka dhacday Las Vegas ee dalka Mareykanka – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaDAAWO SAWIRO:- In kabadan 20 ruux oo ku dhimatay toogasho ka dhacday Las Vegas ee dalka Mareykanka
DAAWO SAWIRO:- In kabadan 20 ruux oo ku dhimatay toogasho ka dhacday Las Vegas ee dalka Mareykanka
Hiiraan Xog, Oct 02, 2017:- Qasaraha ka dhashay weerarkii ka dhacay magaalada Las Vegas ee dalka Mareykanka oo sii kordhayo.
Ugu yaraan 20 ruux ayaa ku dhintay 100 kalana dhaawac ayaa ka soo gaaray toogasho ka dhacday bandhig faneed lagu qabanayay magaalada Las Vegas ee dalka Mareykanka.
Qof hubaysan ayaa rasaas ku furay barxadii uu bandhiggu ka socday oo ku taalla hoteelka Mandalay Bay
Boqolaal dad ah ayaa goobtii ka firxaday waxaana la maqli karay wax u ekaa rasaas qori ka dhacaysa, sida laga maqli karo muuqaal baraha bulshada la soo galiyay.
Booliisku waxay sheegeen in qofkii laga shakisnaa “dhulka la dhigay” isla markaasna aysan rumaysnayn in ay jiraan dad kale oo laga shakisan yahay.
Qof u hadlay isbitaal ayaa sheegay in xaaladdoodu ay liidato 14 ruux oo dhaawac ah.
AKHRISO:- Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Saxiixay xeerka isgarsiinta dalka